Mareykanka oo si rasmi ah u shaaciyay 132 qof oo ku dhintay duqeymaha uu ka fuliyay Soomaaliya iyo wadamo kale – All Bajuni
Mareykanka oo si rasmi ah u shaaciyay 132 qof oo ku dhintay duqeymaha uu ka fuliyay Soomaaliya iyo wadamo kale
Howlgallada milatariga Mareykanka ee ka socda afar dal illaa sanadkii 2019 waxaa ku dhintay 132 qof oo rayid ah, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Pentagon.
Intaa waxaa u dheer, 91 qof oo rayid ah ayaa lagu dhaawacay hawlgallada ka socda Ciraaq, Suuriya, Afgaanistaan iyo Soomaaliya, sida lagu sheegay warbixin sannadeedka Wasaaradda Difaaca ee ku saabsan khasaaraha rayidka ee la xiriira hawlgallada Mareykanka.
“Qiimeynta waaxda difaaca Maraykanka ma aysan aqoonsanin wax khasaare ah oo rayid ah oo ka dhashay howlgalada militariga Mareykanka ee Yemen iyo Liibiya sanadka 2019,” ayaa lagu yiri warbixinta.
Dhammaan hawlgallada Milatari ee Maraykanka ee sannadka 2019 waxaa loo fuliyay si waafaqsan sharciga shuruudaha dagaalka, oo ay ku jiraan sharciga ilaalinta dadka rayidka ah si loo yareeyo halista waxyeellada, ”ayaa lagu yiri warbixinta.
Sida warbixinta lagu sheegay, khasaaraha ugu badan ee rayid ayaa ka dhacay Afghanistan, iyadoo 108 ay ku dhinteen 75 kalena ay ku dhaawacmeen.
Ugu yaraan 22 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay 13 kalena waa lagu dhaawacay Ciraaq iyo Siiriya, halka laba qof lagu diley saddexna lagu dhaawacay Soomaaliya.